KuTho.org - Home | Facebook
See more of KuTho.org on Facebook
SME Mentoring Program in Bagan Nyaung Oo
RVT Company Limited
KuTho.org added 10 new photos.
· July 28, 2017 · Singapore ·
H1N1 ကာကွယ်ရန်အတွက် N95 mask များ လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်းများ ..
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ H1N1 ကာကွယ်ရန်အတွက် N95 mask များ နေရာပေါင်းစုံအတွက် များစွာလိုအပ်နေသည်ဟု သိရှိရပါသည် .. ထို့ကြောင့် ကုသိုလ်အဖွဲ့မှ တတ်အားသရွေ့ ပါဝင် လှူဒါန်းပါမည် ဖြစ်သောကြောင့် တဖက်တလမ်းမှ ကူညီအားဖြည့်ပေးလိုသူ အလှူရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည် ..
KuTho.org added 22 new photos to the album: တောင်တီး 2017-18 — with Ku Tho.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January တွင် ပြည်ပေါင်းတလည်မြို့နယ် အမက၊ တောင်တီး မှ ကျောင်းသား/သူများကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
KuTho.org added 30 new photos to the album: မငေးကြီး Aug 17.
· February 13 at 10:18pm ·
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ August တွင် ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ မငေးကြီးကျေးရွာမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအားထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်။
မငေးကြီး Aug 17
KuTho.org added 17 new photos to the album: မော်ကျွန်း Aug 17.
· February 13 at 10:10pm ·
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ August တွင် မော်ကျွန်းမြို့ ပစ္ဆိမာရုံကျောင်းမှ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ကလေးများအားထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
မော်ကျွန်း Aug 17
KuTho.org added 17 new photos to the album: မော်ကျွန်း Dec 17.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ December တွင် မော်ကျွန်းမြို့ ပစ္ဆိမာရုံကျောင်းမှ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ကလေးများအားထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
မော်ကျွန်း Dec 17
KuTho.org added 24 new photos to the album: မော်ကျွန်း Jan 18.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January ( ၇ ) ရက်နေ့တွင် မောင်လမြိုင်ကျွန်းမြို့၊ ပစ္ဆိမာရုံကျေညင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော တိုင်းရင်းသားကျောင်းသူ/သားများကို သွားရောက် ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။
မော်ကျွန်း Jan 18
KuTho.org added 38 new photos to the album: မငေးကြီး Jan 18.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January ( 12 ) ရက်နေ့တွင်ဒေးဒရဲမြို့နယ် မငေးကြီးကျေးရွာ မှ ကလေးများအား ဖျာပုံမြို့၊ ရွာမကျောင်းတိုက်တွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
မငေးကြီး Jan 18
KuTho.org added 19 new photos to the album: အဇုတ်ကြီး Jan 18.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January ( 12 ) ရက်နေ့တွင် အဇုတ်ကြီး ကျေးရွာ မှ ကလေးများအား ဖျာပုံမြို့၊ ရွာမကျောင်းတိုက်တွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
အဇုတ်ကြီး Jan 18
KuTho.org added 50 new photos to the album: ဖျာပုံ/အောက်ကွင်း Jan 18.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January ( 12 ) ရက်နေ့တွင် ဖျာပုံ/အောက်ကွင်း (၁) နှင့် (၂) ကျောင်းများမှ ကလေးများအား သွားရောက်၍ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
(ကလေးများ၏ ကျေးဇူးတင်လွှာ အချို့ ကို တွဲထားပေးပါသည်)
ဖျာပုံ/အောက်ကွင်း Jan 18
KuTho.org added 47 new photos to the album: ဖျာပုံ/မှော်ဘီ Jan 18.
· February 13 at 3:07am ·
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January ( 12 ) ရက်နေ့တွင် ဖျာပုံ/မှော်ဘီ အလက (ခွဲ) နှင့်ထိန်တပင် ကျောင်းများမှ ကလေးများအား သွားရောက်၍ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးခဲ့ပါသည်
ဖျာပုံ/မှော်ဘီ Jan 18
KuTho.org added 57 new photos to the album: အောင်သုခဘက (တော်ကေး) Jan 18.
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် January (၉ ) ရက်နေ့တွင်ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်/တော်ကေး ကျေးရွာ ၊ အောင်သုခ ဘကကျောင်းမှ ကလေးများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၀ တန်းကျေင်းသားများမှာ ဘေးရွာ တော်ကလိတ်ကျေးရွာတွင် ဘော်ဒါ/ ဝိုင်းသွားရောက်တက်နေသောကြောင့် တော်ကလိတ်သို့သွားရောက် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အောင်သုခဘက (တော်ကေး) Jan 18
KuTho.org added 49 new photos to the album: အောင်သုခ ဘက (တော်ကေး) Dec 17.
ကွမ်းခြံကုန်း/တော်ကေး ကျေးရွာ ၊ အောင်သုခ ဘကကျောင်းမှ ကလေးများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ အောင်သုခ ဘက ကျောင်း တွင် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ၂၃၀ ကျော်ခန့် ရှိပါသည်။ ၁၀ တန်းကျေင်းသားများမှာ ဘေးရွာ တော်ကလိတ်ကျေးရွာတွင် ဘော်ဒါ/ ဝိုင်းသွားရောက်တက်နေသောကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ.။ ဘကကျောင်းသားအားလုံးကိုယ်စား တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးဝဏ္ဏိတ ထံပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးခရီးစဉ်အတွင်း အာဟာရဒါနအဖြစ် ကျောင်းသူကျောင်းသား ၂၃၀ ကျော်အတွက် ကြက်သားကြော် အသီးအရွက်စုံကြော် ဒိုးနတ် ဝေဖာ နဲ့ Sunkist ဖျော်ရေ များကို အလှူရှင်များကိုယ်စား လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်
အောင်သုခ ဘက (တော်ကေး) Dec 17
KuTho.org added 66 new photos to the album: ဘိုကလေး- Aug 17.
· February 13 at 1:37am ·
ဘိုကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ပျဉ်းမကုန်း၊ ရုပ်ဆိုင် ၊ရွှေဘိုစု၊ ငြုပ်ကောင်း၊ မရဲရွာသစ် နှင့် သင်ချောင်းကျေးရွာ များမှ ကလေးများအား ၂၀၁၇-၁၈ (သြဂုတ်)ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးခရီးစဉ်များမှ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ဘိုကလေး- Aug 17
KuTho.org added 59 new photos to the album: ဘိုကလေး-Dec 17.
· February 13 at 1:23am ·
ဘိုကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ပျဉ်းမကုန်း၊ ရုပ်ဆိုင် ၊ရွှေဘိုစု၊ ငြုပ်ကောင်း၊ မရဲရွာသစ် နှင့် သင်ချောင်းကျေးရွာ များမှ ကလေးများအား 2017-18 ပညာသင်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး ခရီးစဉ်များမှ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
KuTho.org added 30 new photos to the album: မင်းကျောင်း ဘက — with Ku Tho.
· February9at 7:51pm · Singapore ·
· February9at 7:50pm · Singapore ·
KuTho.org added 13 new photos to the album: ဆရာ/မ နှစ်ဦး လစာထောက်ပံ့ခြင်း ၂၀၁၇-၁၈ စာသင်နှစ် — with Nay Thu.
· February2at 11:31pm · Singapore ·
KuTho.org added 8 new photos to the album: 2017 Donations Via Starfish picker — with Khin Maung Wan and 14 others.
· January 28 at 5:58pm ·
အလှူရှင်များ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်းပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်များအတွက် သတိတရ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေသော် ။
2017 Donations Via Starfish picker